Ny fisaraham-panambadiana - Alemaina mpisolovava an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Efa betsaka ny fanontaniana: Inona no tokony ho fantatry ny
Ny fisarahana na ny fisaraham-panambadiana dia tokony hanomboka amin'ny torohevitra tsara*
Raha tianao, dia afaka mihazakazaka amin'ny fotoana rehetra ny tena manokana ara-dalàna mpanazatra ny aina amin'ny ny lohahevitra momba ny fisintahana sy ny fisaraham-panambadiana afaka, mazava ho azy, maimaim-poana, tsy adidy, ary, ambonin'izany rehetra izany, tena namana. Mety misy ny tsy fitovian-kevitra, fifanakalozan-kevitra, ary Eny, koa mitam-piadiana. Soso-kevitra: azonao atao ny manaraka ny fisaraham-Panambadiana, te fitsipika, ao amin'ny notarial ponenana fifanarahana mihazona. Fotsiny rehefa tafasaraka amin'ny vaovao, tsy maintsy ho tonga ny fotoana ao amin ny trano amin'ny tsirairay somary mazava.
Ao amin'ny fanambadiana ihany no masoandro dia tsy foana
Tsy hahomby foana. Matetika izany dia tonga mba goavana ny fifandonana.
Raha misy te-hifindra avy amin'izy ireo, dia tokony ho fitsipika izay mitondra ny vola lany ny trano.
Izany dia mihatra koa amin'ny tranga iray ny fananana trano na ny trano. Raha tsy misy azy, te-hifindra avy, tokony hahita vahaolana. Izany dia azo atao izay ianao dia ho asaina amin'ny alalan'ny fanambadiana an-trano satria ny hany ampiasaina. Ny Taloha-Mpiara-miasa tsy maintsy mijery ny ho an'ny isan-trano. Tena tsara foana, raha manao izany ny vahaolana ho an'ny namana mba hahita na ny azy ireo. Raha tsy izany, ny lalàna ireo mpahay lalàna be dia be ny vola. Raha tsy mahazo na inona na inona na latsaky ny vadinao, dia afaka manao ny fisarahan ny fikojakojana ny filazana. Ho an'ireo izay tsy maintsy mandoa vola noho ny fisarahana fikojakojana, dia misy ny antsoina hoe deductible farafahakeliny ao amin'ny Euro, izay tsy maintsy mitoetra.
Fisarahana fikojakojana tokony foana ny kajy sy an-tsoratra, ary avy hatrany rehefa avy ny fisarahana, mba hametrahana ity, araka ny fanampiana ara-bola tsy azo atao ny milaza izany, amin ny fitsipika, mitodika amin'ny tany aloha.
Raha toa ny fisarahan mitondra navoaka tsy azo novana ho amin'ny fisaraham-panambadiana izy, dia afaka namaky ny tsara indrindra fifanarahana tao an-Trano.
Raha toa ianao tsy afaka ny hanao izany, mbola na inona na inona fa ny fianakaviana, ny fitsarana tsy maintsy manapa-kevitra hoe iza no namela ny zavatra tokony handray. Raha toa ianao ka efa samy nanao sonia ny findramam-bola, dia samy manohy. Raha iray ihany ny trano an'ny samy ianareo, na izany aza, ny Banky ho an'ny Sary nahazoan-nanao sonia, dia ny bola dia lazaina fa ny ankamaroany ny hany tompon'ny fananana. Am-ponja mbola hizara ny raharaha fisaraham-ho an'ny ray aman-dreny. Raha te-hanana hany am-ponja, dia mila manao fampiharana ny fianakaviana fitsarana. Ny fitsarana nanome anareo ny hany am-ponja, afa-tsy raha tena zava-dehibe ny antony misy izay mety hampidi-doza ny fahasambaranao amin'ny ankizy, raha toa ka ny mpiara am-ponja dia ho foana. Amin'ny tsara ny fidirana dia tsy voafaritra amin'ny alalan'ny lalàna. Ho hitanao amin'ny maha-ray aman-dreny atao, ny iray ho an'ny ankizy tena vahaolana tsara. Na misafidy ny antsoina hoe fifanakalozana modely, izay ny ankizy herinandro iray sy ny herinandro manaraka ny ray mitoetra, na raha toa ka ny zanakao dia isaky ny faharoa ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny ray, na ankoatra izany, andro iray ao anatin'ny herinandro, dia Roa hiala. Tsy afaka mahita vahaolana, ny mitsara ny raharaha. Vadinao eo amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny fampiasan-kery ny lalàna Alalan'ny fanambadiana fananana ny fiaraha-monina ny accrued tombony, izany no toe-of-ny famerana ny fitondrana amin'ny alalan'ny fanambadiana fananana. Nandritra ny fotoana ny Fanambadiana nahazo fananana na ny mpivady miara-dia heverina. Rehefa misaraka, ny Mpiara-miasa dia manan-jo hahazo onitra ny Mpiara-miasa hafa. Izy ireo dia samy tompony ny mpiray fananana, tokony hahita vahaolana ny zavatra tokony hitranga izany fananana araka ny fisaraham-panambadiana. Raha toa ka tsy mahita na inona na inona amicable vahaolana io, dia ho lafo be ho anao.
Izay misy ny azo atao eo amin'ny resaka fananana sy ny fisaraham-panambadiana.
Ny fanomezana onitra mifehy ny fisotroan-dronono entitlements fa efa nividy roa. Raha te-fisaraham-panambadiana, dia mandray ny olona iray izay afaka mividy tsy ny fisotroan-dronono amin'ny alalan'ny filazana ny matihanina ny asa, ny vady ny antsasaky ny fisotroan-dronono ny zon'olombelona izay efa azony. Izany tsy milalao anjara amin'ny rehetra, nahoana no ny iray amin'izy ireo dia tsy fisotroan-dronono hevitra nandritra ny fotoana ny Fanambadiana nangonina. Raha ny iray tamin'izy ireo rehefa avy ny fisarahana, maty, dia mitoetra ho ara-dalàna Vady marina ny lovany sy ny didim-pananana sy ny Testamenta nanaiky ilay hafa ny vadiny. Raha toa ianao na ny Ex-Mpiara-miasa nanana ny hafa disinherited, dia mbola antsoina hoe tsy maintsy atao ny anjara filazana ny habetsaky ny antsasaky ny intestate hizara manohitra ny mpandova. Raha ny maty vady tsy nanao fangatahana fisaraham-panambadiana na ny fisaraham-panambadiana dia nanaiky tsara ny lova dia mbola toy ny teo aloha. Raha ny maty vady dia ampiharina ny fisaraham-panambadiana talohan'ny nahafatesany, dia voahilika ny marina ny lova sy ny tsy maintsy anjara filazana ho anao.
Isaky ny vadinao dia, amin ny fitsipika, ny tenany voatery mba haka ny fivelomana.
Raha toa ianao ka tsy afaka mikarakara ny tenany, ianao no mitondra ny lohateny hoe ny post-panambadiana ny fikojakojana, nanome ny loharanom-bola teo Aloha vady hamela izany. Ny antsoina hoe fahampiana raharaha, izany hoe, raha toa ka misy tsy ampy ny vola azo mba hanomezana fahafaham-po ny rehetra milaza ho an'ny Fikojakojana. Ny sekoly dia laharam-pahamehana-taona ny ankizy sy ny ankizy hatramin'ny. Ny taona iray dia miankina, dia mety ho tonga ny mazava ho azy sy hahazo post-panambadiana ny fikojakojana. Ny mpitrosa Mpiara-miasa mety ny deductible (amin'izao Fotoana izao. Avy Aachen, Berlin, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Hamburg, Hanover, Cologne, Leipzig, Munich, Stuttgart, Wiesbaden ny Zwickau, dia hahita fanazavana manan-danja ao an-tanàna.
Ara-Dalàna Ny Olona